I-china lady enemibala emfutshane yokuvala iinzwane zeegusha zeslipper mveliso kunye nabathengisi Yiruihe
Iigusha zeegusha zeBhuti-Ladies
Inenekazi elinemibala evaliweyo iinzwane zeegusha
IiMoccasins zesikhumba samadoda
I-Lady Cross Vamp yeegusha S ...
Inenekazi elinemibala evulekileyo ...
Inenekazi elinemibala evaliweyo ...
ILady Classic Cuff yegusha ...
Umbala oqaqambileyo uya kuthatha “imibala” ngakumbi ebusika obubandayo. Kwaye imibala eyahlukeneyo eqaqambileyo iya kwenza ukuba umntu onxibayo abe nokukhetha ngakumbi. Imibala kwaye ifudumele, inokuhlala kunye.
Phezulu: Isikhumba segusha
Umgca: Isikhumba segusha
Insole: Isikhumba segusha
Outsole: TPR, irabha kuphela
Uluhlu loBukhulu: # 3-8 kubungakanani be-UK / # 36-41 nge-Euro Size / # 5-10 kubungakanani be-USA
Umbala: Nawuphi na umbala unokwenziwa.
I-vamp & lining & insole yenziwe liNqanaba lase-Australia i-Sheepskin.
Impahla yesikhumba segusha idibana ne-REACH, i-Europe Standard） kunye ne-United States California i-65 esemgangathweni, i-American Standard）.
Indawo esebenzayo: Ngaphaya.
Emva komsebenzi onzima wosuku, isibini esityibilikayo esithambileyo, isikhumba semvu yeyona ndlela ilungileyo yokuziphumza. Uboya bendalo, obuphilileyo nobuphefumlayo, Iya kukunika iinyawo zakho ikhefu elipheleleyo kwizithende eziphakamileyo nakwizinto zokwenziwa. Kwaye inkampani yaseYirui United isebenzisa uboya bezimvu obuthunyelwe ngaphandle baseAustralia enye yemveliso yeslippers yoboya lolona khetho lwakho lubalaseleyo.
Eli nenenekazi linemibala emfutshane yokuvala iinzipho zezimvu ezenziwe ngomatshini zenziwe ngeAustralia A-iklasi yeegusha kwizikhuselo kunye neelinings. Yomelele kakhulu kwaye iya kuzigcina iinyawo zakho zifudumele kwaye zikhululekile ngalo lonke ixesha, nokuba usebenza ekhaya okanye uthatha imeyile, olu hlobo lwee-slippers ziya kukwenza uzive ukhululekile kwaye womile. Umbala ococekileyo, oxineneyo, ophezulu ophezulu wase-Australia uboya begusha obungqongqo bungqingqwa bujikeleze iinyawo kwaye uphumle naphakathi kweenzwane, ezingafumanekiyo nakweyiphi na into enefayibha yemichiza. Ngokuqinisekileyo lukhetho lokuqala lwabafazi abasebusika abanemfashini zangaphakathi zeslippers.
Kwaye ufele lweegusha luyi-hygroscopic kangangokuba ilungile nakwiinyanga zehlobo ezijulileyo ukugcina iinyawo zakho zintsha kwaye zomile ngalo lonke ixesha. Kungenxa yokuba kukho umaleko wefayibha phakathi kwesikhumba segusha, esigcina iqondo lobushushu lingaguquguquki unyaka wonke, kwaye ikwanceda ukunqanda igumbi ekubandeni kakhulu, umzekelo, xa isixhobo somoya sisebenza ehlotyeni.
Isole yodwa yenziwe ngerabha, isiliphu sokulwa nesinxibo, oko kwenza ukuba kukhanye kwaye kukhuseleke ukunxitywa.
Ngelixa abantu abaninzi bekhetha ukuhombisa okubizayo, ipere yee-slippers zewayini zinokubonisa eyona nto uyithandayo.
I-slippers yeegusha zizipho ezifanelekileyo zokuthumela uthando olufudumeleyo kubahlobo bakho kunye nosapho.
Egqithileyo ILady Classic yeCuff Sheepskin Slipper
Okulandelayo: Inenekazi elinemibala evulekileyo yeZinyosi zesikhumba
Umbala oMnyama oMnyama oVulekileyo weZwane weSlipper
I-Lady Cuff Wool Moccasins
Amadoda egusha yeeMoccasins
Amadoda kufutshane neenzwane zoboya besiliphu
ILady Cuff yezihlangu zeegusha